Sina Runjin © Krunt ™ -2000 Famokarana sy famokarana milina fanamboarana voankazo | Runchen
Runjin © Krunt ™ -2000 Masinina afangaro amin'ny voankazo
Ataovy ao anaty gilasy ny granule voankazo maina, granule siramamy na granule ranoka. (ny fitaovana dia tsy mety amin'ny fitaovana viscous, ary koa ireo izay mandray mora foana ny hamandoana na mora adorana)
Ny motera dia mitondra volom-bidy be dia be hampitana granula milamina sy mahomby ary ampidirina anaty gilasy amin'ny alàlan'ny paompy vano iray, izay mampifangaro ireo granules sy slurry gilasy avy amin'ny mixer namboarina miaraka amin'ny hafainganam-pandeha tsy tapaka. Ny paompy famahanana vane dia ahitsy amin'ny alàlan'ny potentiometra.
VoankazoTM-2000 dia mpihinana voankazo voa ary mahafeno tanteraka ny filan'ny fahadiovan'ny sakafo. Ny fitaovana dia amboarina amin'ny compressor frigetra avo lenta sy faritra avo lenta, izay natao hihaona amin'ny fenitra henjana momba ny fahadiovana, ny fahamendrehana ary ny faharetana. Ny faritra rehetra mifandray amin'ny gilasy dia vita amin'ny vy vy 304. Izy io dia miaraka amin'ny casters, mora ny mihetsika sy mametraka azy.
Hopper sy kaopy be fatra
Ao amin'ny hopper dia misy fitaovana fampifangaroana mba hahazoana antoka fa ny volom-bidy be dia be dia be dia be dia be dia be dia be ny granules voankazo. Ny visy fatra isa dia afaka mamahana ireo granules voankazo amin'ny fidiran'ny paompy famahanana vane. Ny hafainganam-pandehan'ny visy kuantitative dia azo ahitsy eo anelanelan'ny 0% sy 100%.
Paompy manome vano
Ny paompy fihinanan-kanina dia misy ny kodiarana familiana amin'ny lelany ary afaka mampifangaro ny granule voankazo ao anaty fitotoam-boaloboka navoakan'ny milina fanala hatrizay. Mandritra ny fihodinan'ny ravina dia afaka manisy tombo-kase marina ny fidiran'ny slurry amin'ny voankazo izy io, ka mitoka-monina amin'ny rivotra manodidina ny ranomandry vita amin'ny gilasy. Mandritra ny fivezivezena sy ny fihodinan'ny kodiarana fiara, rehefa tonga any amin'ny faritry ny gilasy ny solila, dia miverina ho any anaty kodiarana fiara izy, ary miaraka amin'izay, ary apetraka ao ambany ireo granules voankazo. Ny fepetra tsy misy dingana dia azo atao amin'ny haingam-pandeha amin'ny kodiarana fiara amin'ny alàlan'ny potentiometra
Fiasan'ny milina fampifangaroana voankazo
Tena mety izy io ary azo ampiasaina mivantana aorian'ny famohana ny herinaratra.
Fanadiovana an-tserasera CIP
Ny fiasan'ny tontonana fandidiana dia afaka manomboka ny fizotran'ny fanadiovana CIP, mba hahafahana manitsy ny paompy mihinana sy ny ampahany mifangaro amin'ny fanadiovana efa napetraka mandritra ny ozinina taloha, amin'izay hanamorana ny fanesorana ny fitaovana fampifangaroana sy ny visy kuantitatif, mba hitondrana fanadiovana tanana.
Fahaizana manampy voankazo
Amin'ny alàlan'ny fisafidianana visy isan-karazany, VoankazoTM-2000 dia afaka mamokatra akora 8 ～ 200L / ora isaky ny andiany.
Fizarana tsy voatery
Moto famahanana 0,75 KW
Moto mifangaro 0,75 KW
Motera paompy vane 1.1 KW
mpanova 0,15 KW
Hery tanteraka 2,75 KW
Fantsona famahanana, ivelany 51 mm 2 "Hoop
Manary fantsona, ety ivelany 51 mm 2 "Hoop
Previous: Runjin © Krunt ™ -RM35 Ice Cream Machine
Runjin © Krunt ™ -4000 Masinina afangaro amin'ny voankazo